Iningi labantu bakuleli baphila ngemali yesibonelelo - Ucwaningo | News24
Iningi labantu bakuleli baphila ngemali yesibonelelo - Ucwaningo
Johannesburg – Izibalo zitshengisa ukuthi bebengu-17 million abantu baseNingizimu Afrika abathembele ezibonelelweni zikahulumeni uma kuqhathaniswa nabangu-15.5 million abasebenzayo ngonyaka owedlule.
Lokhu kungokombiko weSA Institute of Race Relations okhishwe ngoLwesithathu.
Ocwaningweni olwenziwe yisi sikhungo kutholakale ukuthi lokhu ngeke kube nomthelela omuhle emnothweni wakuleli ngenxa yokuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzokuba nzima ukuba uhulumeni akhiphe le mali noma ayinyuse.
“Lezi zibalo zitshengisa ukuthi kuningi okungase kuholele ekutheni kube nezinxushunxushu kwezenhlalakahle nakwezombusazwe,” kusho umcwaningi walesi sikhungo uGerbrandt van Heerden.
OLUNYE UDABA: Iningi labantu lithembe isibonelelo sikahulumeni e-E Cape
“Uma umnotho ufinyelela esigabeni sokungakhuli, lehla nezinga lokuqoqwa kwentela, sizonyuka isibalo sabantu abathembela ezibonelelweni zikahulumeni.
“Lokhu kuzoholela ekutheni uhulumeni akhathule kwezinye izinngxenye zokuhlinzeka umphakathi ngezidingo ukuze ahlinzeke abantu ngezibonelelo. Siqagula ukuthi lokhu kungase kunyuse izinga lemibhikisho enodlame.”
Kwinhlolovo eyenziwa yilesi sikhungo ngo-2001, babebalelwa ku-12.4 million abantu ababengasebenzi uma kuqhathaniswa nabangu-3.9 million ababethola izibonelelo kuhulumeni.
Lokhu kusho ukuthi bangu-330 abantu abaqashiwe kwabangu-100 abathola isibonelelo sikahulumeni.